Tetris lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Mahaliana ny olona ny rehetra izao Tetris nanomboka rehefa nandao ny fanao am-paosy dika, fa ankehitriny po dingana ilaina lojika Tetris lalao, dia afaka hilalao amin'ny aterineto sy ny maimaim-poana. Fitanana ny mahazatra safidy rehefa dia ilaina ny mandefa amin'ny sela poana lavo singa sy rotate azy mba hanaraka ny endriky ny azy. Na izany aza, ny fahasamihafana ary manintona kokoa ho hitanao mahafinaritra isika dikan-ny fanorenana ny trano, ary na dia ny piramida jeografika Variant, raha ny kontinanta ho nifindra any toerana. Afaka milalao misy ny singa, mitondra miara-tsipika.
Safidy safidin'ny trondro
Parrot sy sakaiza
Biby Goavam Block 1010
Biriky ny piozila kilasika
Sambatra Clown Tetriz
Biby 1010 Tetriz
Lalao Tetris tamin'ny Category:
Farany Tetris lalao
Lalao Fruit Match4 Puzzle
Biriky sy sakana
1010 Blocks ala
Lalao Online Rehetra Tetris lalao an-tserasera
Iza no tsy tia Tetris?
ny amin'izao anio izao dia be dia be ny tetris. Ary izy rehetra dia ao amin'ny maneran-tambajotra, miandry ny mpankafy ny karazana. Ary nandritra ny fijery Tetris lalao dia tsy manam-paharoa. Izany dia ny faharoa misesy taorian'ny malaza "Electronics", "Fa ianao miandry," fanao am-paosy ny solosaina lalao. Ary nisy hita, tsirairay avy - toy ny fahagagana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy mpihazona ny iray faran'izay-mangatsiaka tsy tablette na dia miaina akaikin'ny fihetseham-po toy izany koa fa ny zaza 90, izay nanome Tetris ray aman-dreniny. Io fihetseham-po sarotra ny mahatakatra izao fa ny aterineto ao an-trano rehetra, ary milalao Tetris ho maimaim-poana dia afaka ny ho ao. Mendrika izany tombontsoa izany, teny an-dalana, sy ny namany Sary manome. Koa mitsahatra manipy ny tambajotra mba hitady ny toerana izay mahafeno ny fangataham-panazavana "tetris milalao an-tserasera ho maimaim-poana." Efa nahita izany! Tsy afaka milalao ihany, fa koa télécharger iray amin'ireo variants ny Tetris eo amin'ny solosaina. Tsy misy teritery - hankafy! Taorian'ny lalao, tetris lalao mahatonga efa ho mandrakizay. Azo atao fa ny mamirapiratra dikan ankehitriny mitondra ny ity lalao ity genre ny sain'ny zanakao. Taorian'ny Tetris manafina mihoatra noho toa Raha vao jerena. Stratejika eritreritra - misaina fampiasana samy mahatakatra ny fototry ny izany, inona no ho manaraka. Hafainganam-pandehan'ny ny fanehoan-kevitra - isika rehetra hahatsiaro ny fomba mitombo haingana tahan'ny ny endriky ny tarehimarika teo amin'ny ambaratonga ambony indrindra ao Tetris. Ary farany, inona no kely lalao izany manampy amin'ny fampandrosoana ny maka sary fisainana. Noho izany dia tokony tena hampiditra ny zanakao lahy na ny zanani-vavy amin'ny lalao ny fahazazany.
izao tontolo izao-malaza solosaina dia namorona Tetris lalao tao amin'ny tapaky ny taona 1980, ny Sovietika Alexey Pajitnov mpahay siansa. Rehefa afaka izany, dia nisy tena firoboroboan'ny ao amin'ny lazan'ny Tetris: izany no vokatra ho toy ny vondrona samihafa, dia anisan'ny fangatahana ny lalao Zazalahy sy ny 8-bit Nampahery. Ankehitriny dia afaka hilalao ho maimaim-poana Tetris eo amin'ny solosaina navigateur amin'ny mini-lalao.
Fitsipi-ny malaza Tetris lalao
Ny fitsipiky ny mahafinaritra io dia tena tsotra - eo amin'ny pilalaovana avy teo an-tampon'ny tapa-endriny samy hafa, ary tsy maintsy napetraka mba hanangana mafy orina tsipika marindrano. Tafavory tsipika manjavona, sy ny mpilalao ny tantara notanana Bonus hevitra. Raha toa ka tsy hametraka ny famolaina teny an-andro, raha ny fandehany nisafotofoto jumble ny tarehimarika izay mameno ny habakabaka lalao, ka manjary sarotra ny miasa, toy ny mpilalao be mbola kely kokoa ny fotoana eo amin'ny anjara sy mampihetsi-po sarivongana. Rehefa ny fanangonan-karena ny piozila ny poti ambony mikasika ny lelan-nilalao an-tsaha, ny lalao ho tapaka.
Flash lalao hilalao Tetris ho maimaim-poana na afaka ny dikan-mahazatra, ary ny farany dikan. Classic Tetris - fanoharana ny kianja kely efatra miara-biriky ahitàna ny kianja, tsipika mahitsy sy angular zavatra samy hafa ny endriny. Tarehimarika tsirairay dia azo mihodina ny manodidina ny mpiray, mahatonga azy ho mora ny mampifandray azy ireo amin'ny tsirairay. Safidy - dia, ohatra, ny fianakaviana ny telo loko baolina. Dia mianjera ao amin'ny ankapobeny fitohanana, ary ny mpilalao afaka manova ny loko filaharana ao amin'ny sary sy hiverina izany horizontally na mitsangana. Dia ny mafy orina tsipika dia mitovy loko, izay hanjavona avy amin'ny milalao an-tsaha. Ao Tetris afaka hilalao amin'ny aterineto maimaim-poana amin'ny iray ihany ka manjary miboiboika miloko, fa tsy ho mahitsy tsipika, ary ny telozoro sampahom-boaloboka. Fanampiny izany dia afaka ny ho efamira, ny tsirairay izay manana karazana sary. Ohatra, ny olona tsara ry zalahy ao ny fomba ny "Anime" - ireo milentika hatrany ambany ny varavarana lamba mbamin'ny zavatra avy amin'izy ireo dia ilaina ny manolotra andian-telo na mihoatra mitovy tarehy.
Misy ihany koa ny telo dimensions dikan-Tetris - ny fitsipika ao aminy no tsy mitovy, fa ny fahatsapana ny telo-amin'ny lafiny cubes manome somary hafa noho ny sary efamira teo amin'ny efijery. Tetris lalao kilalao mamela sarotra kokoa fihodinana, ary mitandrina ny fientanentanana izany ho an'ny rehetra, ny fahafinaretana - fampidinana hafainganam-pandeha tarehimarika dia mampitombo tsikelikely, fanerena mba hanapa-kevitra avy hatrany, noho ny fahadisoana tsy mahafinaritra no tena vokany. Play Tetris Online ihany koa ny miara-manolotra izany eo amin'ny milina - mamoritra Puzzles roa samy hafa natao tany an-tsaha. Noho izany dia azo atao ny handamina ny fifaninanana ho an'ny voangona hevitra, na milalao fotoana. Manasa anao izahay mba hanandrana isan-karazany ny dikan ny Tetris ato amin'ity fizarana ity ny lalao vavahadin-tserasera!